फाल्गुन २५, २०७५, शनिबार
“म दुईटा घरमा भाँडा माझ्छु । बोर्डिङमा नै बच्चा पढाउँछु तर रझेना स्कुलमा पढाउदिनँ ।” माध्यमिक विद्यालय रझेनाका प्रधानाध्यापकले आफ्नो सरकारी स्कुलको बेहालबारे भनेका कुरा जीवन गौतमले सुनाए, “मेरो स्कुल लथालिङग थियो, अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चा यहाँ पढाउन छोडेका थिए ।"
माध्यमिक विद्यालय रझेना घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा पर्छ । वि.सं. २०१४ सालमा स्थापना भएको रझेना स्कुल यो भेग!को निकै पुरानो हो । दाङ जिल्लाको सदरमुकाम बजारैमा रहेको यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् जीवन गौतम । अहिले वरिपरिका वोर्डिङ स्कुलहरु सुक्न थालेका छन् । तर, रझेना सरकारी विद्यालयले मुहार फेर्न थालेको छ । नर्सरी कक्षामा मात्रै दुई सयभन्दा बढी बच्चाहरु छन् । जम्मा १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु भएको यस विद्यालयमा निजी र सररकारी गरि जम्मा ५० भन्दा बढी शिक्षकहरु छन् । बोर्डिङ स्कुलका बच्चाहरु खोसेर सरकारी स्कुलमा ल्याउन के–के जुक्ति अपनाए अध्यक्ष गौतम र उनका समूहले ?
लामो समय विध्यार्थी राजनीति गरेर केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भइसकेका जीवन गौतम अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका सल्लाहकार पनि हुन् । सरकारी स्कुललाई पूनर्ताजकी दिन सफल जीवन गौतमले आफ्ना अनुभव यसरी सुनाए ।
चुनावबाट अध्याक्ष बनाउने कुरा गलत
रझेना स्कुलमा मेरा आमाबुवाले पढाउनुभएको थियो । मेरा दाइबहिनीहरु पढेका थिए । म पनि यहीँ पढेको थिएँ । २०७३ सालतिरको कुरा हो । रझेना स्कुलमा वार्षिक भेला थियो । मलाई अतिथिको निम्तो थियो । म स्कुल गएँ । स्कुलमा माओवादी, एमाले र काँग्रेस तीन दलका नेताहरु एक ठाउँ बस्यौं । सहमिति बनायौं, चुनावी अध्यक्ष नबनाउने ।
त्योभन्दा अगाडि दुई/तीनवट विद्ययालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु चुनाव लडेर आएका थिए । हामी तीनै जना राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले स्कुलमा चुनाव गर्ने कुरा राम्रो होइन भन्यौं । विद्यालय व्यास्थापन समितिका लागि चुनाव गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने ‘प्वाइन्ट’मा सहमति भयो ।
भरत अर्याल घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मैले स्कुलको अध्यक्ष हुनको लागि उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ । उहाँ मान्नुभएन । काँग्रेस वा माओवादीवाट बनाउँ भन्नुभयो । काँग्रेसका साथी बस्न मानेनन् । उनले पनि मलाई नै प्रस्ताव गरे । सुरुमा मैले पनि अस्वीकार गरेँ । स्कुललाई समय दिन सक्दिनँ होला । म नेकपा माओवादीको दाङ जिल्ला इन्चार्ज पनि थिएँ । राजनैतिक हस्तक्षेपको आरोप पनि लाग्ला भनेर म अध्यक्ष बस्न मानिनँ । तर, सहमतिको अध्यक्ष बनाउने भनेर हामीले नै भन्ने, फेरि हामी कोही पनि नबस्नु राम्रो भएन ।
त्यसपछि नैतिक रुपमा पनि मलाई दबाब पर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बस्न तयार भएँ । यो अध्यक्ष रहरले होइन बाध्यताले मलाई बस्न कर लाग्यो । त्यसपछि सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिमा सहमत भयौं र मेरो अध्यक्षतामा सबैलाई समेटेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनायौं । चुनाव गरेनौं ।
त्यसछि म नियमित स्कुल जान थालेँ । केही समय मलाई स्कुल बुझ्न समय लाग्यो । इच्छाले होइन, परिस्थितिले अध्यक्ष भएपनि रझेना स्कुललाई नमूना स्कुल बनाउँनुपर्छ भन्ने लाग्यो । प्रधानाध्यापकसँग नियमति सल्लाह गर्न थालेँ । शिक्षकहरुसँग सल्लाह गर्न थालेँ । अभिभावकहरुसँग पनि नियमित बस्न थालेँ ।
म पढ्दाको स्कुल
यो स्कुलमा म पढ्दासम्म अति राम्रो थियो । यहाँ जिल्लाका डाक्टरहरुका छोराछोरी पढ्थे । सिडियोका छोराछोरीहरु पढ्थे । जिल्ला हाकिम, डाक्टर, इन्जिनियर र नेताका छोराछोरीहरु यहाँ पढ्थे । निम्न मध्यम वर्गभन्दा माथिल्लो आर्थिक हैसियत भएकाहरु पनि यहाँ पढ्थे । यस्तो राम्रो विद्यालयमा आजभोलि मानिसहरुले आफ्ना बच्चा पढाउन छाडेका रहेछन् । बोर्डिङ स्कुलहरु खुल्न थालेपछि यसको शाख घट्न थालेको थियो ।
यो थारु समूदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो । उनीहरुको मुख्य पेशा कृषि र घरेलु मज्दुरी हो । आजभोलि त्यो समूदाय निकै सम्पन्न भएका छन् । शिक्षित भएका छन् । आजभोलि निर्माण व्यवसायी पनि भएका छन् । ठेक्कापट्टा गर्छन् । त्यसकारण पनि सार्वजनिक स्कुलमा उनीहरुको नानीहरु आउँदैन । बोर्डिङमा पढाउँछन् । मैले सामाजिक आर्थिक अवस्था बुझेपछि मेरो स्कुललाई त्यो अनुकुलको बनाउने योजना बनाएँ ।
समयअनुसार बजारले मागेको शिक्षा बोर्डिङ स्कुलले दिएका छन् । दाङका बोर्डिङ स्कुलहरुको अध्ययन गरेँ । बोर्डिङबाट द्यार्थीहरुलाई खोसेर कसरी ल्याउने ? मेरा प्रअ उद्धव न्यौपानेसँग निरन्तर छलफल गरेँ । निजि स्कुले दिएको शिक्षा हामीले दिनुपर्ने कुरामा सहमति जनायौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले रझेना सरकारी स्कुललाई अंग्रेजी माध्यम बनाउनुपर्छ ।
अंग्रेजी शिक्षक छान्ने कला
निजी श्रोतबाट अंग्रेजी शिक्षक राख्ने, ‘फियर इक्जाम’बाट शिक्षक छनोट गर्ने सहमति भयो । यो भनेको व्यवस्थापन समितिको मान्छे, प्रअको मान्छे, नेताका मान्छे राख्ने कुराको अन्त हो । हामीले यो व्यवहारमा नै लागु गर्यौ । त्यसपछि २०७४ को शैक्षिक वर्षका लागि ४ जना अंग्रेजी शिक्षकको विज्ञापन गर्यौं । लिखितको पास मार्क ५० राख्यौं । एकदम ‘टयालेन्ट’ अंग्रेजी शिक्षकहरु छान्यौं । स्कुलमा भएका शिक्षकहरुलाई पनि अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा विकास गर्यौं ।
एक सयमा मन्टेश्वरी
गरिबका छोराछोरीहरुलाई मन्टेश्वरी स्कुल खोइ ? सरकारले बालशिक्षा नाममा लगानी गरिरहेको छ । सकाहरुलाई मासिक ६ हजार मात्र दिन्छ । यति तलब खाएर कसरी बालशिक्षा हुन्छ ? तर घोराही बजारका बच्चाहरुले रुझेना स्कुलमा मासिक एक सय रुपियाँमा पनि मन्टेश्वरी कक्षा पढन पाउँछन् ।
सकाहरुलाई मन्टेश्वरी तालिम दिन पठाएँ । तीनतीन महिना तीन जनाले तालिम लिएर आए । त्यसपछि मैले सय रुपियाँमा मन्टेश्वरी खोलेँ । तर, उनीहरुले खाजा घरबाटै बोकेर आउनुपर्छ । त्यसैमा हामीले मासिक १८ सय रुपियाँ तिर्ने मन्टेश्वरी कक्षा सुरु गरेका छौं । उनीहरुले स्कुलमा नै खाजा खान्छन् । जो आमाबाबुले खाजापानी पठाउन भ्याउँदैन, यो मन्टेश्वरी उनीहरुको लागि हो । अहिले दुई सय बच्चाहरु प्रि–स्कुलमा मात्र छन् । विद्यार्थीहरुका लागि रझेना स्कुलले बसको व्यवस्था गरेको छ ।
आजभोलि मानिसहरु व्यस्त छन् । विभिन्न पेशाव्यवसायमा लागेका छन् । उनीहरुले सानैमा बच्चा स्कुल पठाउन चाहन्छन् । दुई वर्षपुगेपछि बच्चा स्कुलमा पठाइहाल्छन् । यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले मन्टेश्वरी कक्षा खोल्ने योजना बनाएका हौं । एकपटक बोडिङ स्कुल छिरिसकेको बच्चालाई फिराएर ल्याउन गाह्रै हन्छ । आमाको काखबाटै कसरी बच्चाहरुलाई स्कुलमा छिराउने ? यस्मा पनि छलफल गरियो । मिहिनेत गर्यौ । घोराहीमा बोडिङ स्कुलमा ती हजारदेखि चार हजारसम्म तिरिरहेका अभिभावकहरुलाई तान्ने ‘प्लान’ बनायौं ।
मन्टेश्वरीको शिक्षकहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेका छौं । त्यहीँ भएका शिक्षकहरुलाई स्कुलले नै लगानी गरेर तालिम दिन पठायौं । सबै मन्टेश्वरीका सबै शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् ।
आफैबाट सुरु, सरकारी स्कुलमा बच्चा भर्ना गरेँ
ठूलो भेलामा वार्षिक कार्यक्रम गरियो । त्यो वार्षिक सभामा पहिलोपटक आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा पढाउने घोषण गरेँ । म मेरो बच्चालाई आउँदो सरस्वती पूजाको दिन भर्ना गरेर उद्घाटन गर्छु भनेँ । पहिलो दिन सरस्वती पूजाको दिममा मात्रै ३५ जना बच्चाहरु भर्ना भए । अहिले प्ले ग्रुप, नर्सरी र एलकेजीसम्म कक्षाहरु छन् ।
२०७५ वैशाखबाट अंग्रेजी भाषालाई व्यवस्थित गर्यौं । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । भर्खरै अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा ९ सुरु भएको छ । अहिले भर्णाका लागि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा लिन थालेका छौं । गत सालको इन्ट्रान्स’ परीक्षामा दुई सय ५० जना विध्यार्थी पास नै भएन । स्कुलले धान्न नसक्ने भएपछि कति विद्यार्थीहरुलाई फर्काउन परेको छ ।
बोर्डिङभन्दा धेरै सस्तो
सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुले पढाउँदै पढाउँदैन् । पढाउन जान्ने शिक्षकहरु पनि कम छन् । तर मेरो स्कुलका शिक्षकहरुले राम्रो पढाउँछन् । हामीले स्कुल फिस पनि कम लिएका छौं । दाङका बोर्डिङ स्कुलको नर्सरी कक्षामा पढ्ने पैसाले रझेना स्कुलमा ८ कक्षामा पढ्छन् । जस्तै कक्षा ६ मा मासिक सात सय ५० तिर्दा बोर्डिङ स्कुलकै सेवासुविधा पाउँछन् । कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने यो स्कुलमा ११ र १२ मा म्यानेजमेन्ट, मेजर अंग्रेजी, विज्ञानलगायतका विषयहरु नियमित पढाइ हुदै आएको छ ।
मोबाइल एप्सबाट स्कुलको मोनिटरिङ
स्कुलको मोनिटरिङ गर्न रझेना स्कुलमा नै पुगिरहनुपर्दैन । स्कुलमा सिसी क्यामेरा राखिएको छ । मोबाइल एप्स प्रअ र अध्यक्षको मोबाइलमा कनेक्ट गरिएको छ । जुनसुकै ठाउँबाट पनि मोबाइलबाट मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरुले कसरी पढाइरहेका छन् । बच्चाहरु के-के गरिरहेका छन् । अतिरिक्त क्रियाकलाप कसरी गरिरहेका छन् । त्यो हेर्न मोबाइलमा नै सम्भव भएको छ । समयसापेक्ष मोबालबाट हेर्न सकिने प्राविधिक व्यवस्था पनि रझेना स्कुल व्यवस्थापन सिमितिले बनाएको छ ।
निजी शिक्षकहरुलाई सन्चयकोष
निजी शिक्षकलाई खुसी बनाएका छौं । निजिका शिक्षकहरुले पनि स्कुल छोड्दा खाली हात जानु नपरोस । अबदेखि उनीहरुलाई सन्चयकोषको व्यवस्था हुन्छ । अहिले निमाविका शिक्षकलाई प्रावि शिक्षकको स्केल दिएका छौं । माविका शिक्षकलाई निमाविको स्केल दिएका छौं । हामी उनीहरुको सेवासुविधा बढाउँदै जैजानेछौ । उनीहरुलाई बढुवा गर्ने छौं ।
विद्यार्थीका लागि प्रसस्त सुविधा छ । कम्पूटार साइन्सको ल्याब छ । विज्ञानको ल्याव छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा मेरो स्कुलभित्र स्वीमिङ पुल बन्छ । पिटी, योगा, नित्य र खेलकुदहरु नियमित हुन्छ । यो वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी गर्यौ । योगा शिक्षक छन् । यो वर्ष चाहीँ खेलकुद र नृत्यको फरकफरक शिक्षक हुन्छ । हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापहरुलाई यो वर्षदेखि अझै व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं ।
सरकारी स्कुल राम्रो बनाउने हो भने तीन वटा उपाया अपनाउनुपर्छ । १, सरकारले प्रसस्त लगानी गर्नुपर्छ, २, अभिभावकबाट सहयोग माग्नुपर्छ । ३, यति पनि नगर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्नुपर्छ ।
बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिका युवा नेता हुन । अनेरास्ववियुको केन्द्रिय अध्यक्ष भैसकेका उनी पार्टी एकता अगाडी सम्म दाङ जिल्लका इन्चार्ज पनि हुन । हाल उनि नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हुन । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका राजनीतिक सल्लाहकार गौतम मन्त्रालयमा बसेर आदर्श मात्रै छाट्दैनन बरु सामुदायिक बिधालयलाई स्तर उन्नति गर्न आफैपनी भिडेका छ्न । राजतन्त्र बिरुद्धको आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा सबै भन्दा पहिला सडकमा उठाउने बिद्यार्थी नेताको रुपमा पनि उनलाई चिनिन्छ ।